क्या प्रति क्लिक भुगतान अमेज़ॅन विज्ञापन निवेश को लायक छ?
ती व्यापारीहरू जसले आफ्नो अनलाइन बिक्री बढाउन चाहन्छन् अमेजन पीपीसी विज्ञापन अभियान प्रयोग गरेर लाभ उठाउन सक्छन्. यो अमेजन कार्यक्रम सही तरिकाले सिर्जना र व्यवस्थापन गरिएको छ अनलाइन अनलाइन व्यापारीहरूलाई थप सम्झौताहरू बनाउन र तपाईंको जैविक रेटिङ बढाउन सबै अवसरहरू.
यस आलेखमा हामी पीपीसी अप्टिमाइजेसन रणनीतिहरू छलफल गर्नेछौं जुन तपाईले आफ्नो उत्पादनको कोटिको लागि सकेसम्म आफ्नो मुनाफा बढाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।.
Amazon ले खोज कार्य कसरी भुक्तान गर्यो?
धेरै सुरूवात बाट शुरु गरौं हामी हामीलाई Amazon को सशुल्क खोज मा चर्चा गर्दछौं - ??????? ?? ??? 452.
Amazon ले लाखौं खोजहरु प्रत्येक महिना प्राप्त गर्दछ. तीमध्ये धेरै खरीद-तयार बिक्रेताहरू हुन् जुन अमेजनमा आउनु एक स्पष्ट इरादासँग आउन चाहन्छन् कि उनीहरूलाई चाहिने कस्तो खरिद गर्नुहुन्छ. तिनीहरू केवल Amazon खोज बक्समा आफ्नो इच्छा टाइप गर्नुहोस्, र खोजी प्रणालीले तिनीहरूलाई तिनीहरूको क्वेरी उत्पादनहरूसँग सम्बन्धित प्रदान गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताको चाहना पूरा गर्न सम्भव छ. यी नतिजा जैविकको रूपमा मान्न सकिन्छ. तथापि, त्यहाँ भुक्तान खोजी परिणामहरू छन् कि विक्रेताहरूले दायाँ स्तम्भ वा कार्बनिक परिणामहरू तल देख्न सक्छन्. यी प्रायोजित अमेजन उत्पादहरूसँग राम्ररी खरिद गर्न सबै मौकाहरू छन् किनभने तिनीहरू लक्षित दर्शकहरूलाई दृश्यात्मक हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई खरीद गर्न मनसाय छ।.
यस अभियानको अनुसार, तपाइँले तपाइँको विज्ञापनमा प्रत्येक प्रयोगकर्ताको क्लिक प्रति भुक्तानी गर्नुपर्दछ. Google मा धेरै उस्तै उस्तै. प्रति क्लिक लागत एक बजार आलाबाट अर्कोमा भिन्न हुन सक्छ. यद्यपि, यदि तपाईंसँग तपाईंको अमेजन पे-प्रति-क्लिक अभियान चलिरहेको एक स्मार्ट दृष्टिकोण हो, तपाईले लगानीमा उच्च रिटर्न पाउनुहुनेछ.
सबै कुरा सही गर्न को लागी, तपाईंलाई आफ्नो विज्ञापन रणनीति को विकास गर्न को लागी र विज्ञापन को शुरू गर्न को लागी सबै कठिनाइहरु को माध्यम ले जाना आवश्यक छ।.
एक नियमको रूपमा, विजेता अनुकूलन अभियान निम्न चरणहरू समावेश हुनुपर्छ:
एक बजार अनुसन्धान गर्न लक्षित बिक्री सर्तहरू फेला पार्ने जुन बिक्रीमा परिणत हुन्छ;
आफ्नो खोज सर्तहरूको सूचीलाई सानो पार्नुहोस्, सबै गैर-परिवर्तित कुञ्जी शब्दहरू मेटाउने;
खोज सर्तहरु को लागि राम्रो तरिकाले बदलन को लागि बोलियां बढयो.
आवश्यक अमेजन विज्ञापन मेट्रिक्स
बिक्री को विज्ञापन लागत - विज्ञापन मा व्यतीतित बिक्री को प्रतिशत. तपाइँले बिक्रीको कुल बिक्री खर्च गरेर बिक्रीको विज्ञापन लागत गणना गर्न सक्नुहुन्छ.
बिक्री गरिएको विज्ञापन - उत्पाद बिक्री को कुल संख्या जुन खोज मा एक विज्ञापन को एक हप्ता भित्र उत्पन्न गरिएको छ।. तपाइँ आफ्नो व्यक्तिगत बिक्री कुल विज्ञापन प्रदर्शन र अन्य सामानको लागि अभियान प्रदर्शन रिपोर्टमा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ.
इमेजिक्स - यो मीट्रिक शो अमेजन खोजीमा तपाईंको विज्ञापन कति पटक प्रदर्शन गरिएको थियो. अन्तिम प्रयोगकर्ताको लागि सबै प्रयोगकर्ता क्लिकहरू अमान्य क्लिकको कारण समायोजन गर्न सकिन्छ.
क्लिक गर्दछ - तपाईंको विज्ञापनहरु लाई क्लिक गरेको पल्ट को संख्या. तपाईंको विज्ञापन रिपोर्टबाट अवैध क्लिकहरू हटाउन यो एकदम चुनौतीपूर्ण छ.
अमेजन पीपीसी अभियान
को निर्माण गर्ने तरिकाले तपाईको लिस्ट तयार पार्नुहोस्
0) Amazon मार्फत प्रति-क्लिक विज्ञापन विज्ञापन सुरु गर्नु अघि तपाईंले गर्नु आवश्यक पहिलो कुरा हो तपाईको सूची अनुकूलित आधारभूत अमेरीकी आवश्यकताहरु अनुसार. यसले कम गुणस्तरको डराउँदो हेरविचार सूचीमा ट्राफिक उत्पन्न गर्न भावना बनाउन सक्दैन. यही कारणले तपाइँले तपाइँको सूचीको प्रत्येक पक्षमा काम गर्ने, सबै क्षेत्रहरू पूरा गर्न र लक्षित खोज सर्तहरूसँग समृद्धि गर्नुपर्दछ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो सट्टामा सट्टामा लक्षित गर्नु भएको सबै सान्दर्भिक खोजी सर्तहरू (शीर्षक, बुलेट बिन्दुहरू, उत्पादन विवरण, आदि)।. )
तपाईंले आफ्नो छविको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ. तपाईंको सामानको तस्बिर लिनको लागी एक पेशेवर फोटोग्राफरलाई सोध्नुहोस् र तिनीहरूलाई अमेजन दिशानिर्देशहरू (डिजाइन गरिएको 85%, उत्पाद, उच्च रिजोल्यूशन, जुम गर्ने क्षमतालाई समर्पित छ) को डिजाइन गर्न डिजाइन गर्नुहोस्।. यसबाहेक, तपाईंले उत्कृष्ट उत्पादन विवरणहरू पालना गर्नुपर्छ तपाईंको उत्पादनको फाइदाहरू र प्राथमिक सुविधाहरूमा एक्टिन्ट बनाउनका लागि. र अन्तमा, तपाईंलाई केही सकारात्मक समीक्षाहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ. अमेजन अमेजनमा महत्त्वपूर्ण रैंकिङ कारकको रुपमा सेवाले बिक्रेताहरूलाई आफ्नो खरीद निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउँछ. यो अमेजनमा "विश्वास कारक" भनिन्छ जुन तपाईको उत्पादन रूपान्तरित दरलाई सीधा असर गर्न सक्छ.
अमेजनमा दुई प्रकारका विज्ञापनहरू छन् - जुन सही तरिकाले विज्ञापनहरू छनौट गर्नुहोस्
अमेजनमा दुई प्रकारका विज्ञापनहरू छन् - जसले तपाइँको दर्शकहरूलाई तपाइँको वेबसाइटमा पठाउँछ (अमेजन उत्पाद विज्ञापन ); र एक जसले अमेजन भित्रै तपाईंको उत्पादनमा पठाउँछ (अमेजन प्रायोजित उत्पादन).
यदि तपाईं अमेजनमा आफ्नो उत्पादनहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने, अमेजन प्रायोजित उत्पादन विज्ञापन प्रयोग गर्न उचित छ. यस पोष्टमा, हामी केवल यस प्रकारको अमेजन विज्ञापनको बारेमा कुरा गर्नेछौं.
यस विज्ञापन अभियान को अनुसार, तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु लाई अमेरीका को आन्तरिक खोज नतिजाहरु लाई खोज सर्तहरु को लागी तपाईंको सामाग्री रैंकिंग को लागी हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ।. यद्यपि, यदि तपाईसँग पहिले नै यी सबै शब्दहरूको लागि उच्च जैविक रैंक्सहरू छन् भने, तपाईंले दुई पटकको प्रदर्शन पाउनुहुनेछ.
यदि तपाईं अमेजन प्लेटफर्ममा नयाँ हुनुहुन्छ भने, अमेजन प्रायोजित उत्पादन अभियानले तपाईंलाई महत्वपूर्ण सम्भावना प्रदान गर्नेछ, जुन तपाइँको संभावित ग्राहकहरु को सामने तपाईंको उत्पादनहरु लाई प्रदर्शित गर्दछ।. यसको अतिरिक्त, यो तपाईंलाई अमेजन SERP मा आफ्नो जैविक रेट को बढावा दिन मा मदद गर्न सक्छ, तपाईंको उत्पादन पृष्ठों मा अधिक देखि अधिक लक्षित यातायात को आकर्षित गर्न को लागी.
आफ्नो विज्ञापन अभियान बनाउनुहोस्
अब तपाईं जान्दछन् कि अमेजन प्रायोजित उत्पाद विज्ञापन अभियान कसरि काम गर्दछ, यसैले अमेजनमा तपाइँको पहिलो अभियान सिर्जना गर्ने समय हो. यस खण्डमा, म यो कसरी सजिलै संग र चाँडै गर्न कसरी व्याख्या गर्नेछु.
आफ्नो विज्ञापन अभियान स्थापित गर्न को लागी तपाईंलाई अमेजन विक्रेता सेन्टर मा जाने को लागी र अभियान प्रबन्धक विकल्प को चयन गर्न को लागी जरूरी छ. यहाँ तपाईँले एउटा बटन फेला पार्नुहुनेछ "अभियान सिर्जना गर्नुहोस्. "तपाईंले सुरू गर्न यसलाई क्लिक गर्नु पर्दछ. यहाँ तपाईंले आफ्नो विज्ञापन अभियानको नाम सिर्जना गर्न अनि दैनिक खर्च गर्न सक्ने बजेट सेट गर्नुपर्छ. तपाईंले आफ्नो अभियानको नाममा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ किनकि पछि जब तपाईंसँग एक खातामा धेरै अभियान हुनेछ, तपाईं यसको साथ गडबड गर्न सक्नुहुन्छ.
एक नियमको रूपमा, उत्पादनहरूमा तपाईका परिवर्तनहरू कम मा सुरु हुन्छ. यद्यपि, समयको प्रवाहको साथ यो दर बढ्दै गएको छ. जब यो हुन्छ, तपाईंको लागत प्रति क्लिक सुरु भन्दा कम हुनेछ. यसैले यो तुरुन्तै उच्च स्थापित गर्न एकदम सानो ढोका हो.
एक लक्षित टाईप छनौट गर्नुहोस्
अमेजन विज्ञापन विज्ञापनमा दुई प्रकारका लक्ष्यीकरणहरू छन् - स्वचालित र म्यानुअल. म तपाईंलाई म्यानुअल लक्ष्यीकरण प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु किनकि यसले तपाईंको विज्ञापन अभियान अन्तर्गत पूर्ण नियन्त्रण प्रदान गर्दछ र तपाइँलाई तपाइँको व्यवसायको सान्दर्भिक सोच्ने कीवर्डहरू लक्षित गर्ने मौका दिन्छ।.
स्वचालित लक्ष्यीकरण पनि अर्थ बनाउँछ यदि तपाईं आफ्नो अमेजन विज्ञापनमा आफ्नो समय र प्रयासहरू लगानी गर्न चाहनुहुन्न. यस अवस्थामा, तपाईं पूर्ण रूपमा अमेजन अनुसन्धान प्रणालीमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ. यो कुनै पनि अतिरिक्त उपकरणहरू लागू नगरी नयाँ कीवर्ड सुझावहरू फेला पार्न एक राम्रो तरिका हुन सक्छ. यहाँ तपाईँले केही खोज सर्तहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले कहिल्यै पनि लक्षित गर्न सोच्न सक्नुहुन्न.